PUBLISHED ON : 18 July, 2017
जापानमा,भाषागत दक्षता नै पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा हो
टोकियो ।हाल ,जापान नेपाली विद्यार्थीहरुको वैदेशिक शिक्षाको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । बर्षेनी यहाँ थुप्रै विद्यार्थीहरु अध्यायनका लागि आउने गरेका छन् । जापान आउने विद्यार्थीहरु केहि अपवाद बाहेक सबै सुरुवातमा जापानीज भाषा स्कुलमा, भाषा अध्यायनका लागि आउने गर्दछन् । किनकी जापानमा आएर थप अध्यायनका लागि पहिलो शर्तनै भाषा हो । भाषागत दक्षता हासिल गरिसकेपछि मात्र अन्य विषयगत पढाईहरु सम्भव हुन्छ । यहि क्रममा जसरी नेपाली विद्यार्थीहरुको जापान प्रति मोह बढ्दै गएको छ, त्यहि अनुपातमा नेपालमा जापानी भाषा र जापानी शिक्षाका बारेमा परामर्श दिने तथा नेपालबाट जापानसम्म आउनकालागि मध्यस्थता गरिदिने कन्सल्टेन्सीहरुको संख्यामा पनि ह्वात्तै वृद्दी भएको छ । पहिले पहिले अन्य मुलुकका लागि काम गर्ने परामर्शदातृ संस्थाहरु पनि हिजो आज, जापानको होर्डिङबोर्ड झुण्ड्याएर बस्न थालेका छन् । मुलुकमा वैदेशिक उच्च शिक्षाको सजिलो र भरपर्दो एवं विश्वसनिय देश जापान नै हो भन्ने लहडनै देखिएको छ । तर जापान आईसकेका विद्यार्थीहरु चाँही आउनु अघिको जस्तै खुसी हुन सकेको देखिदैन । यो संगै पछिल्ला वर्षहरुमा जापान सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई हेर्न नजरमा केहि परिवर्तन आएको छ । परिणामत : भिषा प्रकृया लगायतका गतिविधिहरुमा केहि कडा प्रावधानहरु अवलम्बन गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत छ ,यीनै सन्दर्भहरुको पेरीफेरीमा रहेर १३ वर्षअघिदेखी जापानी भाषा र नेपाली विद्यार्थीहरुलाई जापान आउनकालागि मध्यस्थता गरिरहेको,कुमारी जापानीज ल्याङ्ग्वेज स्कुलका प्रिन्सीपल टंक साउद सँग नेपाल न्युजपोस्टका लागि राजन गौतमले गरेको कुराकानी ।
पछिल्ला दिनहरुमा जापानप्रतिको आकर्षण कस्तो छ ?
सिधा भन्नुपर्दा बढिरहेको छ । एककिसिमको बाढीनै छ । हरेकदिन नयाँ नयाँ विद्यार्थीहरु आउनेक्रम जारी छ ।
२/३ वर्ष अघिको तुलनामा त घटेको छ, भन्छन् नि ?
विद्यार्थीहरुको आकर्षणमा कुनै कमि आएको छैन,तर भिषा प्रक्रियाहरुमा जापानी सरकारले चालेका कदमहरुले केहि कडा महशुस भने भएको छ । केहि नेपाली विद्यार्थीहरुको गतिविधिहरुले सम्पुर्ण नेपालीहरुलाई नै हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता ल्याईदिएको छ ।
सन २००५ देखि निरन्तर यहि क्षेत्रमा कृयाशील हुनुहुन्छ, हालसम्म कुमारी जापानी ल्याङ्ग्वेज स्कुलका माध्यमबाट कति जति विद्यार्थी जापान आईपुगेका छन् ?
ठ्याक्कै यति संख्या भनेर भन्न त तत्काल नसकिएला तर, हामी कहाँ भाषा पढ्ने,विद्यार्थी,डिपेन्डेन्ट, विभिन्न पेशाकर्मीहरुको संख्या पनि जोडेर भन्ने हो भने चाँही ४ हजारको हाराहारीमा पुगे होलान् । किनकि हामी कहाँ भाषा पढेर अन्यत्रबाटनै अप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरु पनि उल्लेख्य मात्रमा छन् । साथै हामीले भिषा प्रोसेस गरिदिनै नपर्ने तर भाषाको मात्र आईवश्यकता भएका थुप्रै व्यक्तिहरु पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ ।
अहिलेसम्म ,कुमारी जापानीज भाषा स्कुलबाट,जापानको कुन कुन ठाँउहरुमा विद्यार्थी आएका छन् ?
टोकियो,टोकियो आसापासका सबै प्रान्तहरु,ओकिनवा,फुकुऔका,कोवे,ओसाका,सेन्दाई,हिरोसिमा, र अहिले पछिल्लो पटक होक्काईदोमा पनि पठाएका छौँ ।
त्यहाँ बाट यहाँ त पठाउनुहुन्छ, तर विद्यार्थीहरु यहाँ आएर त त्यहाँ सोचे जति खुसी भएका भेटिदैनन् नि किन ?
त्यस्मा त धेरै फ्याक्टरहरुल् भुमिका खेलेका छन् । र पनि मूख्य त भाषागत अदक्षता, र महत्वकाँक्षा नै हुन जस्तो लाग्छ ।
नेपाली विद्यार्थीहरुमा महत्वकाँक्षा बढाउने काम त यहाँहरु जस्तै कन्सल्ट्यान्टहरुले गर्छन् भनिन्छ नि ?
त्यो पनि केहि हदसम्म सहि हो, तर हाम्रोमा हामी त्यस्ता नचाहिने सपना देखाउँदैनौ । सकभर कम्तिमा पनि १ वर्ष या छ महिना सम्म भाषा पढेर मात्र जानका लागि भनिरहेका हुन्छौँ । त्यसका साथै, जापान गइसकेपछिका अवसर र चुनौतीहरुका बारेमा राम्रोसंग परामर्श गरेर मात्र पठाउने गरेका छौँ । अझ हामीले त एन फाईव लेवल पास गराएर मात्र अप्लाई गरिदिने गरेका छौँ ।
जापान आउन चाहने र आईसकेका विद्यार्थीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
जापान पछिल्ला दिनमा धेरै विद्यार्थीहरुको गन्तव्यको देश बनेको छ, तर त्यहाँ जानुअघि आफु के का लागि जाँदैछु, त्यसकालागि मैले के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? भाषाको तयारी संगै,मानसिकरुपमा कसरी तयारी हुने भन्ने सबै कुराहरुको पूर्व ज्ञान लिएर जानुस् र गईसकेका विद्यार्थीहरुले पनि, त्यहाँ नेपालको लागि उपयोगी हुने खालका प्रावीधिक विषयहरु पढेर आउनुस र नेपालमा उपयोग गरी मुलुकका लागि पनि केहि योगदान गर्नुहोला ।